online fifandraisana amin’ny ankizivavy
Ny Aterineto dia niditra tao amin ny fiainantsika mafy tokoa fa na dia ny fifandraisana eo amin’ny olona haingana dia haingana nifindra tany amin’ny tambajotra sosialy, firesahana amin’ny efi-trano, sehatra fiadian-kevitra, ny bilaogy. Mazava ho azy, na izany aza, fa ny lehibe indrindra liana amin’ny tambajotra ny fifandraisana mampiseho ny tena nandray anjara mavitrika ny mponina tanora tovolahy sy tovovavy. Sy ny mitovy toy ny mahazatra eo amin’ny fiainana, ny fisafidianana ny tsara tetikady amin’ny fiatrehana ny ankizivavy no tena zava-dehibe ho an’ny tanora izay te-hahomby eo amin’ny Fiarahana. Ny web chat Vehivavy ny zava-Miafina amin’ny toerana izay misy fifandraisana an-tserasera amin’ny ny tovovavy dia misy ny misy tanora ora isan’andro ny vehivavy, ny Fiarahana amin’ny chat.
SOSO-KEVITRA ENINA NOHO NY MIRESAKA TOVOVAVY ONLINE
Safidy rehefa ny fihaonana voalohany eo amin’ny fiainana tena izy na ny voalohany ny fifandraisana ao amin’ny aterineto, ka lasa teo izany fotoana izany, ary ny farany no mitranga matetika. Ankizivavy aho nisento amin’ny nenina sy milaza fa ny zavatra rehetra dia miankina amin’ny ry zalahy. Miaraka amin’ny zanany vavy no fomba fijery, tsy dia miombon-kevitra izany. Indraindray te hibitsika ao amin’ny sofina tsara tarehy ny bandy tsara ny fomba ny fitondran-tenany miaraka aminay — na tamin’ny tena izao tontolo izao sy ny ao virtoaly.
Ny tena mahazatra fahadisoana rehefa fivoriana maika. Maro ry zalahy dia mino fa efa soa aman-tsara voafehiny ireo teknika ny teny, ny fanadinoana fa tsy ny zazavavy rehetra mahafinaritra ny mahatsapa»glued on-the-mandeha». Maro amintsika no tsy mampaninona ny Fiarahana. Saingy. Ny minia cheeky na sickeningly mivantana fikasana ny manomboka ny resaka»toerana mafy»mahatonga fandavana. Ry zalahy izay mihevitra ny tenany ho»teny guru», dia tsy mieritreritra fa ny zava-dehibe indrindra ao amin’ny serasera dia ny haingana alaina ny notsiriritiny fatratra mandrindra ny zazavavy.
Amin’ny farany, dia tena nanapa-kevitra fa ianao no voalohany amin’ny toy izany fitsidihana. Jereo, ireo online rehetra hanan-danja kokoa karatra: tsy misy olona misahirana mba hiresaka amin’ny ilay tovovavy, ny ankizivavy no vonona hihaino anao, ianao manana ny fahafahana hahazo hevitra sarobidy mamorona amin’ny fiombonana fiokoana, mba liana, mba hambabo, mba hamela ny ankamatatra. Dia ho»mobile», miandry. Ny zava-dehibe indrindra fa tsy dia manan-javatra ho tenenina amin’ny zazavavy ny finday, sy ny fototra mahomby ho an’ny fanaraha-maso ny fifandraisana dia nametraka eto amin’ny aterineto.
Unobtrusive ny saina. Online manomboka amin’ny be dia be ny mahay mandanjalanja. Raha ny lehilahy amin’ny tovovavy nanomboka ny fifandraisana, fa amin’ny fotoana iray izy dia milaza fa izy ankehitriny, dia mila miala ny karajia sy ny handeha amin’ny sakafo hariva, ny antony fa izany dia tena tsotra — izany tena mandeha ny mahandro sakafo hariva. Ny bandy fa ataovy mampalahelo ny zava-bita, mba ho tafintohina fa ny fifampiresahana dia tapaka teo ny tena mahaliana-toerana, misalasala na izy te handeha ho any an-dakozia, mandreraka mba hanerena ny feon’ny fieritreretana, straining tena ho azy nandritra ny fotoana ela dia tsy ho malahelo sy mahatsiaro ho irery, fa tsara kokoa mba maniry ny zazavavy tsara ny fahazotoan-komana sy ny fandaharam-potoana ny fanendrena vaovao an-tserasera. Izany dia ho toy ny olona ary tsy hamela ny ankizivavy no mahafinaritra ny fihetseham-po izy dia ho feno fankasitrahana fa tsy nahalala izany tsara.
Ny fahaizana mahagaga. Tena dia midika hoe be dia be. Na dia mahazatra ho fiarahabana ny Internet isan-karazany kely fotsiny ny mpivady ny mari-pamantarana:»indrisy anefa, tsy afaka ny hanome anao ny voninkazo, fa ny indro kely virtoaly tapa-ny ho avy saha». Nafana sy ara-dalàna ny asa dia tsy mamokatra eo amin’ny fiainana ao amin’ny Tambajotra ilay zazavavy manokana traikefa, ary izany dia mety hahatonga anao mitsiky. Ny azo atao ny amin’ny Aterineto amin’ny resaka fitadiavana tany am-boalohany tsy ampoizina ho an’ny zazavavy dia tsy misy farany. Ao amin’ny Tambajotra manana be dia be ny mampihomehy, tantaram-pitiavana, mampihetsi-po, liana horonan-tsary, sary, vazivazy. Nifandraisany tamin’ny zazavavy an-tserasera, aza adino avy ny fotoana ny fotoana ny»fifaliana»ny amin’ny zavatra interesnenko, satria izahay ankizivavy fitiavana be, rehefa voly.
Ny fahaiza-mihaino. Rehefa ny tovovavy dia irery, matetika izy te hiresaka, angamba na dia amin’ny ampahany misokatra. Izany no iray amin’ireo lafiny fifandraisana an-tserasera ao amin’ny Tambajotra kokoa foana ampahibemaso, satria ny loharanom-baovao dia miafina ao ambadiky ny lamba ny hanara-maso. Ary izany no fahafahana lehibe mba hanamafy ny toerana misy ilay tovovavy. Miezaka ny hahazo izany fotoana izao ary tsy hanimba izany, nanapaka ny amin’ny banal ny hafatra tahaka ny:»izaho fiara amin’ny namana omaly namboatra koa, ianao tsy hoe fotsiny inona ny fiara dia mampino, etc.»ny Tovovavy no tsy liana. Ny ankizivavy diso fanantenana izy ary manapa-kevitra ny hangina. Ny kofehy manify ny fahatakaran-javatra tsy hita. Nefa dia ampy fotsiny mba hihaino tsy ara-dresaka mba ny tenanao, olon-tiana iray.
Tombontsoa iombonana. Na dia olon-tsy fantatra teo anivon ny lehilahy sy ny zazavavy misy foana marimaritra iraisana, dia tsy mbola fantany. Sy ny asa ny fifandraisana no ahitana azy ireo ara-potoana sy hamantatra. Miezaha miresaka momba ny iray amin’ireo hafa. ohatra, dia indray mandeha ihany koa efa tsy ara-drariny voaroaka na namana tsara indrindra nijanona ho tsara indrindra. saro-Takarina ny lohahevitra maro toy ny mozika, ny sarimihetsika sy ny boky aman-gazety koa. Fikarohana an-tserasera hevitra mifandray amin’ny zazavavy no tsotra indrindra, satria any amin’ny chat efi-trano, ny tambajotra sosialy, sehatra fiadian-kevitra, sy ny Mampiaraka toerana ny mombamomba sy fanontaniana, izay matetika ny olona dia miresaka momba ny laharam-pahamehana, ary noho izany dia mora kokoa ho anao ny hamakivaky. Matetika izany no tanteraka ampy, sy ny andininy teo aloha — mihaino, sy mihaino ny mahatakatra. Marina indrindra izany ho an’ireo bandy mitady tovovavy ho an’ny lehibe sy ny fifandraisana. Raha ny marina dia matetika dia mitaraina amin ny tsy fahampian’ny fahalalana amin’ny ampahany ny olona, subconsciously miandry ny olona iray izay hamongotra ity fomba fijery ary tena velom-pankasitrahana noho izany.
Olona, ho olona. Aho hiaiky amim-pahatsorana izahay ankizivavy dia tsy lavorary ny zavaboary. Ao amin’ny fifandraisana an-tserasera, dia matetika isika no voalohany,»araka ny fandrefesana ny tehina»ny lehilahy, ny fanafahana azy ireo kely studs, maneso. Nahoana no manao izany isika, tsy misy afaka milaza tena. Ary mino aho fa ireo tsy manan-tsiny fihantsiana — nohaniny fikarohana ny teny hoe»izany»: manan-tsaina, matanjaka, ny fahalalana rehetra, nandefitra ny vehivavy ny fahalemeny. Ary inona no ny fahadisoam-panantenana ho valin ny tsy manan-tsiny antics mandre ny fikorianan’ny naratra ny avonavona, fotsiny ny tsy fahafahana hanao fifanarahana lehibe avy na inona na inona, indraindray hatramin’ny mifandramatra anaty sy tantrums. Fantatro fa tsy fitononana anarana an-tserasera ao amin’ny tenany ihany, dia mety hiteraka tafahoatra fanehoana ny fihetseham-po, ny fomba fifandraisana izay ry zalahy mety tsy ampiasaina, ny tena mifandray amin’ny zazavavy.
Fa ry zalahy
Tonga eto ianao mba hihaona amiko. Eritrereto izany izay zazavavy mahaliana ny olom-pantatra sy ny inflated Tiorkia, izay avy amin’ny kely studs ranolava toy ny fefy ny honahona, miparitaka manerana nasty sprays sy ny ditin-kazo manitra.
Amin’ny ankapobeny, ny tena tolo-kevitra azo fintinina angamba amin’ny manaraka: ry zalahy, hiresaka amin’ny zazavavy an-tserasera, ny fomba mifandray amin’ny tontolo tena izy, te-handresy ny fitiavana. Miezaka mampiasa isan-karazany ny vaovao, mahafa-po ny fahafahana amin’ny aterineto amin’ny fomba mahomby indrindra ho an’ny tombontsoany manokana mba hanorina fifandraisana amin’ny ankizivavy, fa tsy ho narcissism na tsy mitarika ho amin’ny mahasoa ny vokatra ho anao-pitenenana
← Fiarahana amin'ny aterineto ny mombamomba ohatra ho an'ny olona - YouTube-ny